Triangle nyora, geometry fashoni | Kunyora
Mamwe maatatoos emakona matatu, geometry kune simba
Nat Cherry | | Tattoos ane maumbirwo, Zvinhu uye zvinhu nyora
Akanyanya Hipster? Fashoni? Izvo zviri pachena ndezvekuti munguva pfupi yadarika minimalist maTatoo (ayo sevha yataura pane anopfuura chiitiko chimwe) ndiwo marongero ezuva.
Nhasi Tinoda kuongorora zvimwe zvishoma mumhando iyi yetattoo nekugadzira muunganidzwa wematatu matatu. Kunyangwe yakashongedzwa uye yakapusa, hunhu huviri hwakabatsira zvakanyanya kuwedzera mukurumbira wayo, tinowanawo mamwe akawanda marudzi, pamwe nezvinoreva zvakawanda zvakasiyana.
1 Zvinorehwa netatatu matattoos
1.1 Triangles kazhinji
1.2 Valknut, Viking mativi
1.3 Vhura katatu
1.4 Nyeredzi pane zvese zvinonaka
2 Triangle matatu matatu nezvimwe zvinhu
3 Kufunga kwekutora mukufunga
4 Mifananidzo yeTriangle Tattoos
Zvinorehwa netatatu matattoos
Triangle maTattoo, nekushandisa yakapusa chimiro uye panguva imwe chete ine nhoroondo yakawanda, ane zvakawanda zvinoreva uye mikana. Tevere isu tichaedza kukuzivisa iwe nezve avo vane mukurumbira, uye panguva imwe chete inokupa mazano ekubatanidza izvi zvinoreva neyekutanga uye inoshamisa dhizaini.
Lets kutanga nekutanga. Zvinorevei matatu matatu matatu mune zvakajairika? Vari geometric manhamba ane hukama hwakadzika kwazvo mukufungidzira kwevanhu senge chitendero. Pakati pezvinonyanya kutaurwa pane izvo zvine hukama nenhamba 3, zvakare inoonekwa seinoyera netsika zhinji.
Somuenzaniso, muChiKirisitu matatatu ane hukama neUtatu Hutsvene (Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene). Vanogona zvakare kumiririra mhuri (baba, amai nemwana), nguva (iripo, yapfuura neyemberi) kana kunyangwe munhu (muviri, pfungwa nemweya).
Iyo nhamba 3, sezvauri kuona, inoenderana nezvinhu zvakawanda zvinobatanidza nyika yemweya neyenyama. Neichi chikonzero, mutsika zhinji mucherechedzo wekubatana pakati pesimba nepfungwa zvinotungamira kuhungwaru.
Zvakare, iye uyo mamwe marudzi emadzinza emumaguta akagamuchira iyi mhando yetatoo vakaitawo kuti zvive nyore kwavari kuti vasvike pavari nhasi. Pachayo pachayo, iyo nhamba yeatatu inomiririra iyo nhamba yechitatu mujometri uye inozivikanwa nekureruka uye zvakaenzana zviyero. Iyo zvakare yakapihwa imwe chirevo iyo yaizoisa chimiro chekatatu pakati pedenga nenyika.
Nenzira chinzvimbo chetatatu ichi chinewo zvakawanda zvekutaura nezve zvazvinorevaSemuenzaniso, kana yakatarisa kumusoro inomiririra hunhu, zuva, nepo kana riri pasi mucherechedzo wechikadzi, husiku.
Valknut, Viking mativi
Iyo valknut ndeye chiratidzo chekare cheViking chine matatu akabatana matatu. Kunyangwe zvazvaireva zvaive munguva dzekare zvisingazivikanwe, parizvino zvine hukama nechihedheni uye Odin, mumwe wevanamwari veViking akakosha uye anozivikanwa. Mune tatoo, inotaridzika kunge ese ane dhizaini chaiyo, senge iri pamufananidzo, uye neiyo iri minimalist uye inongori neturuatu dzakatsanangurwa mutema.
Kana izvo zvauri kutsvaga zviri nyore tatoo, uyu musiyano nechikamu chakavhurika, chinonziwo delta, chakakwana. Chikamu chinosara chisina kupera chinoratidza kuti munhu haasati apedza kukura achiri uye anogara akavhurika shanduko nyowani.
Nyeredzi pane zvese zvinonaka
Hazvisi chakavanzika icho nyora nyora dzakaumbwa kubva kumatatu. Zvichienderana nemapoinzi enyenyedzi, isu tichave tichida mamwe mativi matatu kana imwe, kuwedzera kune akasiyana maakona.
Pakati penyeredzi dzine mukurumbira dzatinowana, semuenzaniso, Nautical nyeredzi, imwe yeanozivikanwa nhoroondo dhizaini. Munguva yakapfuura, vaimiririra nzira yemufambisi wechikepe, ingave chaiyo kana yekufananidzira, nyeredzi nyere. Mumwe muenzaniso wenyeredzi ine nhoroondo ine Nyeredzi dzaDavidi, mucherechedzo wechiJuda ane mapoinzi matanhatu anogona kuratidza kubatana kwemunhu akanyorwa tattoo nechitendero ichocho.
Triangle matatu matatu nezvimwe zvinhu
Kazhinji matatu matatu matatu matatu haasi iwo protagonists ebasa, asi fambidzana nezvimwe zvinhu zvetatoo. Zvakajairika, semuenzaniso, kuzvishandisa senge kumashure kugadzira tattoo iyo inosanganisa chaiwo uye masitayera ejometri, mutema nemuchena, kugadzira iwo chaiwo maitiro.
Kune rumwe rutivi, vanogona zvakare "kuzadzwa mukati" nezvimwe zvinhu, uye kunyange kugadzira zvimiro zvidiki. Iwo anotonhorera kwazvo nemhuka kana zvirimwa zvinogara mukati mese mematatu, izvo zvaunogona kusarudza zvese zvitema nemuchena uye dhizaini dhizaini. Zvazvinoreva, sezviri pachena, zvichabatanidzwa nechinhu icho chinoperekedza.
Dzimwe nguva, Triangle chikamu che tattoo chakaumbwa nezvinhu zvidiki kwazvo kana zvidimbu. Mune ino kesi, iwe unogona kuenda kune fungidziro yekupa kuenderera uye kubatana kune iyo yese. Nekudaro, iyo tattoo mugadziri anogona kugadzira dhizaini inosanganisa zvidiki, hombe, zvine mavara matatu, anongotsanangurwa ... kusanganisa nezvimwe zvinhu zvejometri kana chishamiso uye mucherechedzo wechitendero, senge miseve, zuva, crescent, michinjikwa ... Zvimwe ivo hazvina zvazvinoreva, asi zvechokwadi zvinonakidza.
Kufunga kwekutora mukufunga
Kana iwe uchinyatsoda kutora katatu tattoo, Tinokurudzira kuti iwe ufunge nezve nhevedzano yekufunga. Semuenzaniso, funga nezve izvo iwe zvaunoda kuti chirevo chayo chive: kana iwe uchida kuti iyo katatu ive nematanho ayo echinyakare, zvirinani kuti iwe usarudze dhizaini iyo inotora mukurumbira wese, ingave iri nyore kana hombe.
Pane kudaro, kana iwe uchida kusanganisa zvinoreva nechimwe chinhu, zvakanaka kuti utarise kuti chii tichaisanganisa, nekuti iyo tatoo ichawana chirevo chinoenderana nechimwe dingindira icho chinoperekedza. Semuenzaniso, katatu nekwakatarisa kunogona kufananidzira kubatana kwako kwakadzika kune zvakasikwa.
Kune rimwe divi, kana izvo zvaunoda zviri dhizaini yejometri inotaridzika inotonhorera uye ndizvozvo, pasina kukakavara kukuru kana zvinorevaTsvaga nyanzvi yekunyora tattoo uyo anogona kugadzirira dhizaini iyo ichave inonakidza. Zvakare, sarudza kana iwe uchida kuve neatatu chete kana kana iwe uchida kuzvibatanidza nemamwe manhamba ejometri.
Paunenge iwe wasarudza ese aya mapoinzi, iwe unogona kutanga kufunga nezve saizi (ingangove iri padhuze nechero motif kana theme yetattoo), kana uchichisarudza icho neruvara kana dema uye chena, chimiro ...
Isu tinogona kunyatso sanganisira iyi mhando yetattoos mukati meiyo geometric chikamu. Uye sezvo tiri, ndinoda kuyeuka muunganidzwa wemajometri emhuka nyora dzatakaburitsa kwete kare kare. Uye kwauri, iwe unofungei nezvemhando idzi dzematatoo? Ini pachangu ndinovada zvakanyanya pane zvandataura pamusoro. Kureruka kwayo uye kuchena kwetambo.
Mifananidzo yeTriangle Tattoos
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Tattoos ane maumbirwo » Mamwe maatatoos emakona matatu, geometry kune simba
Uta nemuseve nyora, dzakatarisana nehunyanzvi uye kugona
Mwedzi nyowani: zvese zvinoreva uye dhizaini